Hotmail Process Login | Ngena kwi Hotmail & Recovery password
Ingaba ufuna isikhokelo efanelekileyo Hotmail Login? Hamba ngalo eli nqaku endithe udale ukuba ikunike ulwazi olululo nezipheleleyo malunga Indlela yokungena akhawunti Hotmail. Ukuba udale akhawunti yakho Hotmail ngoku nqakraza Apha ukuba Yenza akhawunti Hotmail Ekuqaleni.
Yabonani, aye anikeza iNkqubo epheleleyo ukuze Hotmail Recovery Password nayo. Kufuneka ulandele le Hotmail Password umisele ukusebenza ngenyameko kakhulu kwaye kufuneka ukuba unike ulwazi ngokuchanekileyo ngempumelelo ukufunyanwa Hotmail Password yakho.
Wena ufumana Hotmail Process Login Kulula kakhulu kweli nqaku. Mna andiphathanga ulwimi olulula kakhulu ukudala eli nqaku apho wonke umntu aqonde kungaba lula. Landela le inyathelo ngenyathelo isalathiso esikhawulezayo kwaye emva kokugqiba inkqubo wena wangena ku yakho Hotmail Inbox.
Yiya kwi phezulu ukuya ezantsi kweli nqaku yaye uyazi ulwazi olupheleleyo Indlela Ngena kwi akhawunti Hotmail aphilise Hotmail Password. Kufuneka usebenzise yakho Igama lomsebenzisi yaye Inombolo yokuvula kokuba ufumene emva kokuba udale akhawunti yakho ungene ebhokisini lakho Hotmail.
Hotmail Process Login | Step by Procedure Step
Embonisweni amanyathelo ikhankanya ngezantsi ukuze Hotmail Login. Landela la manyathelo njengoko kuchaziwe kwaye uyigcwalise ngempumelelo Ngena kwi akhawunti Hotmail.
Ngena kwi Hotmail login portal esemthethweni: www.outlook.com.
ngoku, nqakraza kwi “Ngena” iqhosha ukungena kwiphepha lokungena.
ngoku, faka Email, phone, or Skype in the given space and press “Okulandelayo”.
ngoku, ufake igama lakho ngenyameko kwisithuba elinikiweyo cinezela “Okulandelayo”.
Ekugcineni, emva kokugqiba onke amanyathelo ngasentla uya kungena kwi akhawunti yakho Hotmail.
Inkqubo Recovery Password Hotmail
Kwimeko ukuba uthe wamlibala password yakho ngoko ungakhathazeki, ulandele la manyathelo akhankanywe ngezantsi yaye igama lakho liya inokubuyiselwa khona ngokulula.
Ekuqaleni, ngenisa website Hotmail ezisemthethweni nqakraza apha: www.outlook.com.
ngoku, nqakraza kwi Ngena uze ufake imeyili yakho, phone, okanye Skype and cinezela “Okulandelayo”.
ngoku, emva koko nqakraza kwi “Libala iphasiwedi yami” ukhetho ukuvula inkqubo iphasiwedi.
ngoku, uya kubona iphepha uthi akhawunti yakho sele wangena email id, press “Okulandelayo”.
ngoku, apha kufuneka ukuba ufake idilesi ezahlukeneyo email ukusuka omnye ozama ukubuyisa password ye uze ufake oonobumba ozibona kwisithuba esinikiweyo kwaye cinezela “Okulandelayo”.
Emveni kwalonto, uya kufumana ikhowudi kwi dilesi ezahlukeneyo email wena wangena, faka loo khowudi kwaye cinezela i “Qinisekisa” iqhosha.
ngoku, ufake iinkcukacha zakho kwi ngathi Igama lokuqala, Ifani yakho, Usuku lokuzalwa, Ilizwe / Ummandla, State / Territory, kunye Ikhowudi yeposi kwaye cinezela “Okulandelayo”.
ngoku, kweli khasi lokuqala, ufake enye i passwords kokuba usebenzise le akhawunti, ngoko ukhethe ukuba usebenzise nayiphi na ngezantsi ukukhankanya iimveliso Microsoft nge-akhawunti yakho. Ekugqibeleni ukhethe “indawo” okanye “Hayi” umbuzo “Ngaba wakha wathenga kwi Microsoft phambi” kwaye cinezela “Okulandelayo”.
ngoku, kule inyathelo lokugqibela, kufuneka ufake iidilesi Email kutshanje uye wathumela imeyili ku. Kananjalo ke imigca izifundo ngqo osandula imeyli athunyelwe.
Ekugcineni, Ulwazi yakho ithunyelwe kwaye kuya kuthatha malunga 24 iiyure ukuphonononga ulwazi lwakho ithunyelwe.
Eli nqaku malunga Hotmail Process Login yaye Inkqubo Recovery Password Hotmail. Mna ndilenzile eli nqaku inyathelo elula kwisimbo inyathelo ukuze baqonde ngokulula. Kufuneka ulandele nje amanyathelo uze ugqibezele inkqubo ngempumelelo Ngena kwi akhawunti Hotmail.
Ngayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukunika impendulo yakho malunga nale nqaku ngoko ayinike esebenzisa ngezantsi kukhankanywa ibhokisi izimvo. Kwaye ukuba ufuna Gmail login njengomsebenzisi owahlukileyo ungakwazi ukukhangela le sithuba uya kunikhokelela kuyo inyathelo ngenyathelo.
Cwangcisa kwakhona Yahoo Mail Password | Indlela Tshintsha Yahoo Mail Password
Outlook Login | Ngena kwi akhawunti Outlook – Guide Quick
Indlela Yenza I akhawunti Hotmail | Complete Guide to Ubhalise